Madaxweynaha Maraykanka Oo Qorshaynaya Ciidamo Ka Hawl Gala Meeraha Maaris, Maxayse Tahay Ujeedada Uu Ka Leeyahay?
(Hadhwanaagnews) Friday, August 10, 2018 18:31:36
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorshaynaya in uu ciidan u sameeyo meel ka baxsan meeraha dhulka.
Ciidamada Jawiga sare:kooxda u ololaynaysa in madaxweyne Trump mar labaad la doorto sanadka 2020 ayaa ka codsanaya taageerayaasha in ay u codeeyaan loogada astaanta u noqoneysa ciidankaas.
Ujeeddada uu Donald Trump ku qorsheynayo in lagu abuuro ciidanka Jawiga sare ee hawada wali lama hir geliin, balse masuuliyiinta ololihiisa ayaa rajeynaya in arrintaasi ay dalka u kordhin doonto awood dheeraad ah oo xagga dagaalka ah.
Agaasimaha ololaha dib u soo doorashada Trump ee sannadka 2010-ka Brad Parscale ayaa u diray taageerayaasha isagoo ka codsaday in ay u
codeeyaan loogada astaanta u noqoneysa ciidamada jawiga sare ee hawada taasoo goor dambe la iib geyn doono.
Farriinta email-ka ah ayaa timid xilli madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu ka soo hor muuqday golaha waaxda gaashaan dhigga ee Pentagon-ka si uu sharraxaad uga bixiyo soo jeedinta ku saabsan ciidamada jawiga sare ee hawada.
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa si dhakhso ah qoraallo ugu soo bandhigay sheekada ku saabsan fikraddan ku aadan laanta cusub ee Milatariga.
"Madxweyne Trump waxa uu doonayaa dhismaha CIIDANKA JAWIGA SARE - war weyn oo muhiim u ah mustaqbalka America iyo jiidaha hore ee dagaalka," akhriso email-ka ka soo baxay kooxda ololaha Trump.
"innagoo u dabbaal dageyna dhawaaqa weyn ee ka soo yeedhay madaxweyne Trump, ololeheennu waxa uu iibin doonaa qeyb cusub oo ku saabsan qorshaha."
Mr Parscale ayaa ka dib ka codsaday taageerayaasha in ay kala xushaan lix loogo oo astaanta ciidankaas ah, kuwaasoo mid ka mid ahna ay ku qoran tahay jumladda: "Meeraha Maris ayaa sugaya"
Dad badan oo arrimaha milatariga falanqeeya ayaa su'aalo ka keenay waxa ay soo kordhin karto in la sameeyo ciidan ka howl gala jawiga sare, waxaana qaarkood ay is weydiiyeen waxa halkaas laga difaacayo.
Waxaa xitaa walaac laga muujinayaa kharashka faraha badan ee uu kusii kordhin doono miisaaniyadda lacageed ee ku baxda ciidanka.
Dadka qorshahaan aan la dhacsaneyn waxa ay aaminsanyihiin in howlaha laga qaban lahaa jawiga sare ee hawada ay horayba u dabooleen ciidanka cirka.
Sarkaal howl gab ah oo ka tirsanaan jiray hay'adda ammaanka qaran ee Mareykanka(NASA) ayaa telefishinka CNN-ka u sheegay in waqtigaan waxa ugu weyn ee ku haboon in diiradda la saaro ay tahay sidii loo xaqiijin lahaa nabad galyada dhinaca internet-ka.